Ndị Ntị Ntị: Rlọ ahịa na-enweta nyocha karịa karịa ụlọ oriri na ọuụ onụ na Yelp | Martech Zone
I nu Kpugheere, ị chere hotels. I nu Ahụ ike, ị chere dọkịta. I nu Yelp, na ohere dị mma nke ị na-eche ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere o jiri bụrụ ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa na ndị na-ere ahịa ka ha gụọ Yelp nwere ọnụ ọgụgụ nke na-ekwu na, nke nde nde nde nde iri abụọ na ise nyocha Yelpers hapụrụ kemgbe mmalite, 22% metụtara ịzụ ahịa vs. 18% metụtara ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ. Ya mere, aha azụmaahịa mejupụtara akụkụ kachasị nke ọdịnaya Yelp, na-egosi ụlọ ọrụ brik na-ngwa agha na-ejigide ọnụnọ Yelp bụ nyocha ahịa mpaghara chọrọ.
Ezigbo ihe atụ ụwa: lelee ụlọ ahịa ndozi ụlọ kachasị elu na mpaghara San Francisco Bay. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nyocha ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enweta dị ịrịba ama. Anyị na-ahụ Ego wuru Ego (250), Lowe's Home Improvement (427), Cole Hardware (297) na Cliff's Variety (461). Ngwakọta a nke ụdị ndị isi na ndị na-ere ahịa nọọrọ onwe ha na-eme ka nyocha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa ọ bụla ga-achọ inweta, ma ọ bụrụhaala na ha nwere mmetụta ziri ezi.
Mana nke a bụ njide: Usoro nyocha nke Yelp bụ ụfọdụ n'ime iwu kachasị ike na ụwa nyocha ndị ahịa, na-amachibido ụlọ ọrụ ịjụ ndị na-azụ ahịa ihe nyocha. Yabụ kedu ka azụmaahịa azụmaahịa ga-esi nwee asọmpi na Yelp ebe ọ bụkwa iwu na-ekwenye ekwenye? Ndị a bụ ndụmọdụ 5 iji nyere gị aka ime nke ahụ.
1. Zere Whapụ Iri Mmadụ Ahụ
Ọ dị mkpa ịghọta na ọ bụrụ na azụmaahịa gị kpebie ileghara ntuziaka Yelp anya wee bido ịrịọ ndị ahịa niile ka ha lelee gị na Yelp, nlọghachi gị na itinye mgbalị nke ego agaghị aba uru. Na-arịọ onye ọ bụla ka o nyochaa gị onye na-abughi onye guzobere Yelper nwere atụmatụ kacha nta nke nyocha 5 ga-edugakarị na nzacha ha. Na, usoro nke ihe eji eme ihe ohuru nke onye oru ohuru na-ahapu nyocha maka ahia gi nwere ike iweli uhie uhie na onye nyocha.
N'iburu nke a n'uche, ma na-ahụkwa nke ahụ Yelp emeela ka ihere na-emebi iwu n'ihu ọha n'oge gara aga, na-ezere onye na-enweghị isi-isi-n'obosara na-arịọ maka nyocha Yelp ga-echekwa ihe onwunwe gị (na ikekwe aha gị), na-ahapụ gị ịnwale usoro ndị ọzọ.
2. Nabata Oke Obi .tọ
Nnyocha nyocha nke ndị na-eduzi nyocha njikwa nyocha GatherUp chọpụtara na nke ahụ 25% nke nyocha sitere na ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche. Ọnụọgụgụ a na-egosi n'ụzọ siri ike na otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kpalie ndị ọrụ Yelp guzobere iji nyochaa azụmahịa gị na-ajụghị gị bụ gafere atụmanya ha n'oge ọrụ. Ọ bụrụ na ị gụọ site na ụdị ndị a ma ama 'Nyocha Yelp, ị ga-achọpụta Yelpers na-ede akụkọ ihe merenụ nke wuliri ha elu: onye ode akwụkwọ gbabara n'ime ebe a na-adọba ụgbọala iji wepụta ihe echefuru echefu, onye na-ere ahịa nke nyere ihe ọmụma n'eziokwu kama ire ere siri ike, azụmahịa nke ga-eji obi ụtọ mee ka ihe ọ bụla ha na-emebeghị.
O nwere ike ịbụ ihe dị nfe dị ka nkwanye ugwu ma ọ bụ dị ka ihe dị ka isi 'wow' ihe kpatara na onye na-azụ ahịa atụghị anya nke ga-eme ka ha gaa Yelp ka ha jiri oge ha n'efu wepụta obi ụtọ ha. Ọ bụrụ na azụmahịa gị chọrọ nyocha Yelp ọzọ, nyochaa atumatu ọrụ ndị ahịa na mmemme iji hụ ma ị ga - eme ka omume ndị kacha nta bụrụ nnukwu mmeri.
3. Bụrụ Onye Ọzụzụ Atụrụ savvy
'Uche nke uche' abụghị nke na-akọwapụta okwu ire ụtọ na-adabere na ndị na-eri nri ma ọ bụ ndị na-enyocha ya, mana ọ bụ nyocha nke echiche ụmụ mmadụ kemgbe narị afọ nke 19 na ndị ọgbọ na-emetụta omume ndị mmadụ. Otu ụzọ dị mfe iji duzie Yelpers ka ọ hapụ gị nyocha (na-enweghị ịjụ) bụ igosi ha na ndị ọzọ nwere. Followingzọ ndị a nke nkwalite nke ọnụnọ gị Yelp ha kwadoro nke ọma:
Na weebụsaịtị gị:
Gosiputa ihe kacha mma gị na Yelp, ma ọ bụrụhaala na ị jụọla ndị nyocha ka ha mee ya.
Jide n'aka na ị na-eji Yelp mma logo n'ime otú ahụ, n’agbanweghị agbanwe ya.
Jide n'aka na ị na-ekwu na nyocha ahụ bụ Yelper onye dere ya, ma agbanwela asụsụ ha ma ọ bụ ọkwa ha.
I nwekwara ike iji Yelp onwe ya wijetị iji tinye ntinye aka na weebụsaịtị gị.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị ruru eru, ị nwere ike ịnweta windo 'Ndị mmadụ hụrụ anyị n'anya na Yelp'.
Rịọ 'Chọta Anyị Na Yelp'
Yiri na ojiji a kwadoro na weebụsaịtị gị, ị nwere ike ịgụnye ihe a na-ekwu, nke a na-agbanweghị agbanwe Yelp na ihe eji ebipụta akwụkwọ. Iji maa atụ, ị nwere ike chọọ ikike nke Yelper iji gosipụta nyocha ha n'ime akwụkwọ mmado na ụlọ ahịa, ọkọlọtọ, broshuọ, akwụkwọ ọkwa na akụ ndị ọzọ.
Usoro ndị a dị n'elu na-achọ ime ka ndị ọrụ Yelp mara na ndị ọzọ na-enyocha azụmahịa ahụ. Na-eji nwayọ nwayọ ma jiri akọ na-azụ ha ka ha chee ihu na ntụgharị nke ha kpebiri ịwụli elu ma tinye nyocha ha.
4. Mee Yelp ka ọ bụrụ ụzọ mkparịta ụka ụzọ abụọ
O nwere ike ịbụ eziokwu na-ama jijiji na-eche eziokwu ahụ bụ na ndị ahịa ọha na eze na-enwe mkparịta ụka na-aga n'ihu banyere akara gị na isi nyocha nyocha dị ka Yelp. Jọ nyocha bụ ihe dị adị na nke ziri ezi nke njikwa aha ọma nke oge a, mana nchekasị (yana nsonaazụ azụmaahịa) enwere ike gbanwee nke ukwuu site na iji ọrụ nke onye nwe ya na-arụ ọtụtụ nyiwe. Njirimara a na-enyere onye nwe ya aka ịzaghachi nyocha niile, yana ọtụtụ ihe edewo banyere ike nke ụdị ahịa a iji gbanwee ndapụta na-adịghị mma. Ekwuola ihe pere mpe ikike nke nzaghachi nke onye nwe ya mma Nyocha iji gosipụta ekele ma bulie njikọ aka ọzọ.
Nyere na ntule Yelp ndị dị mma bụ ndị ahịa afọ ofufo na-eke maka azụmaahịa gị, ọ bụghị naanị na o kwesịrị ịkele ndị nyocha ahụ - ọ bụkwa ụzọ magburu onwe ya iji gosi ndị ọzọ Yelpị etu i siri nwee ekele maka ndị ahịa gị. Onye nwe ahia nke na - eweputa oge ide obere ma omenala nzaghachi na-egosi ezi ekele na-egosi ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike iji oge ha na okwu ọma ha kpọrọ ihe. Ekele dịrị gị site na azụmaahịa ahụ mere dị ka ihe agbamume iji tụlee ya. Kedu onye na-anaghị enwe obi ụtọ maka ekele?
Chetakwa, na Yelpers a ma ama na-arụsi ọrụ ike na Yelp - ọ na-atọ ha ụtọ ide ihe ebe ahụ. Zitere ha ezigbo akara ngosi, yana ọnụnọ onye nwe gị nọ n'ọrụ, na ị nwere ihe omume ntụrụndụ Yelp.
5. Nyochaa Ya, Na Ezi Uche Gị
Ndụmọdụ a kachasị dabara adaba maka azụmaahịa mpaghara pere mpe nke na-ewulite ezigbo mmekọrịta na ndị ahịa ha. Na mpaghara ịzụ ahịa, nke a nwere ike ịgụnye ụlọ ahịa akwụkwọ, ụlọ ahịa uwe, ụlọ ahịa onyinye, ebe a na-ere ahịa, nri onwe onye ma ọ bụ ụlọ ahịa akụrụngwa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụdị mmadụ dị iche iche dịka ndị na-ese ihe, ndị na-egwu egwu ma ọ bụ ndị egwuregwu - ịkpọ ole na ole.
Ọ bụrụ na gị, ma ọ bụ ndị ọkwa gị kachasị elu, ndị otu ntụkwasị obi tụkwasịrị obi na ndị ahịa oge niile, ọ nweghị ihe kpatara na ị nweghị ike ịgwa ha okwu gbasara Yelp na oge enweghị nsogbu. Ọ bụrụ n'ịchọpụta na ha bụ Yelper na-arụ ọrụ, ọ nweghị ihe ga - egbochi gị ịkparịta ụka banyere ihe ọ dị ka ịbụ onye ọchụnta ego na-anwa ịrụ ọrụ n'ime ntuziaka Yelp nke ịghara ịrịọ maka nyocha. Isi nke a abụghị iji gbanwee mmetụta nke onye ahịa - isi bụ inwe mkparịta ụka ụzọ abụọ gbasara ọrụ dị mkpa nke aha azụmahịa na obodo ị na-ekerịta. Kedu ihe ndị ahịa gị chere maka amụma ahụ? Kedu ihe ị chere banyere ya? Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ raara nye ụlọ ọrụ gị, mkparịta ụka dị ka nke a nwere ike gbaa ha ume ime akụkụ ha iji meghe ọnụ ụzọ gị ka ha wee nwee ike ịnụ ụtọ onyinye gị.
Iwu Yelp sitere na ntinye aka ha na eziokwu. Ha choro ka nyocha ghara inwe obi ojoo, iji hụ na ha bara uru nye ndị ahịa niile. Nke a bụ ihe ezi uche dị na ya - ọ dịghị onye chọrọ ịmepụta echiche ụgha dabere na nyocha ma ọ bụ nke a kpaliri.
Ndị na-ere ahịa n’ógbè ahụ, ka ọ dị ugbu a, maara na ha ga-asọrịta mpi iji lanarị ma na-ebi ndụ kwekọrọ na ụkpụrụ ha bụ isi nke ịkwụwa aka ọtọ na ịkwụwa aka ọtọ. Isiokwu a enyela ụfọdụ ndụmọdụ maka irite uru site na nnukwu ike Yelp iji mee ka ụzọ ụlọ ọrụ gị nweta ghara ịba uru, na-ejighị ikpo okwu eme ihe. N'aka nke a, ọ bụ na Yelp, ka ndị ahịa ha na-efe, yana ndị azụmaahịa na-esonye iji gaa n'ihu ịchọpụta ihe na-eme ka mmadụ niile nwee iwu. N'iburu n'uche akụkụ niile, ọ bụ mkparịta ụka kwesịrị ịga n'ihu.
Amaghị ihe a na-ekwu banyere azụmahịa gị na Yelp na mbụ? Ma ọ bụ rikpuo ma ghara ijide n'aka ebe ịmalite? Moz Local ga-enwe ike inyere gị aka ịkọ ma jikwaa ọnụnọ azụmahịa gị nke Yelp ma zaghachi nyocha na atụmatụ atụmatụ njikwa siri ike dị na mpaghara ha.
Bido Nnwale Onwe Gị Taa!
Tags: ugwu dị iche ichengwaike colemmelata ego na-ewu ụlọ na-ewetainjinịa blogChọta Anyị Na YelpKpọkọtaraGetFiveStarsahụikeìgwè ehilocalazụmahịa obodovisibiliti mpagharaobodo visibiliti usoronwee nkeNdozi Homelọ Loweikemoz obodoụlọ oriri na ọṅụṅụNyochaSan FranciscokpugheereobibiaYelpyelp blogyelp iwuyelp nkwadoyelp ndumkpu
Miriam Ellis bụ akụkụ nke Moz Mpaghara otu. Mgbe ọ naghị ede akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa Moz Local ma na-aza ajụjụ na nzukọ Q&A, ọ na-enyere ndị ahịa ya aka ịmara atụmatụ SEO mpaghara ha na ụlọ ọrụ ya. Nhazi Web Solas.
Feb 2, 2017 na 10:16 PM
Edemede mara mma, mana enwerem ajuju. Say sị:
Gosiputa ihe oma gi na Yelp, ma oburu na ị juo ndi nyocha ka ha mee. ”
Gini mere ichoro ikike ma oburu na edeputara nyocha a n’ihu ọha?
Feb 4, 2017 na 4:26 PM
Daalụ maka ịjụ ezigbo ajụjụ. Ọ bụ ihe Yelp chọrọ ka ị mee nke a, n'otu n'ime isiokwu m jikọtara na ibe a. Echere m na otu Yelp si ahụ ya bụ na onye nyocha ahụ ekwenyela ka ekwupụta okwu ha n'ihu ọha na Yelp na nyiwe nke Yelp na-ekesa - ha ekwenyeghị ka ekwupụta okwu ha n'ihu ọha na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Yabụ, m na-agabiga ihe chọrọ Yelp ebe a, mana dịka m kwuworo, echere m na ọ dị mkpa Yelp ka ọ gaa n'ihu na-enyocha ndị nwe ụlọ azụmaahịa ihe na-eme ka iwu dị mma. Olileanya na a na-enyere aka!